Nri calorie 1500 | Nutri Nri
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla n'oge ndụ anyị chọrọ ịkwụsị ibu, dabere na mmega ahụ ma ọ bụ nri. N'okwu a, anyị chọrọ ịkwado nri nke Calories 1500 dị mma maka gị iji mezuo ebumnuche gị.
Contchịkwa ibu bụ otu n’ime omume izizi anyị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị enwee afọ ojuju ma ọ bụ buru oke ibu, isi ihe bụ nri kwesịrị ekwesị na nke zuru oke. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, nọgide na-agụ ahịrị ndị a.
Nri nke calorie 1500 kwa ụbọchị bụ ụzọ dị mma iji felata n’enweghị ọtụtụ mgbochi, yabụ ọ dị mfe itinye aka na ụbọchị anyị ruo ụbọchị. Anyị ekwesịghị ichebiga banyere ibu ókèAnyị kwesịrị ịmara na ịdị arọ anyị na-agbanwe kwa ụbọchị na nkezi nke kilo abụọ, kilo abụọ na-agbada.
1 Atụmatụ ifelata
2 Nri calorie 1500
2.1 Na-atụ aro nri
3 Na-atụ aro ego
4 Nri iji zere
5 Atụmatụ iji mepụta
6 Nchịkọta calorie 1.500
Mgbe anyị na-atụ aro ka anyị felata anyị ga-abụ ihe doro anya banyere ebumnobi anyị, nwee ndidi, na-eme mgbe niile ma na-erubere nri anyị na-ahọrọ isi. Isi ihe na-eme ka mmadụ felata bụ iri obere kalori karịa ka anyị na-etinye, ya mere, anyị ga-ebelata oriri ma mụbaa mmefu caloric dabere na mmega ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, karịa ifelata ọnwa atọ iji nweta ahụ anyị na-arọ nrọ, anyị kwesịrị ịmụta ịgbanwe nri iri nri ka anyị wee ghara ịdaba na mmejọ ma ọ bụ omume ọjọọ. Nke mbụ, ka ị ghara itinye ihe ike gị n'ihe egwu, gbakọọ usoro ọgụgụ gị iji chọpụta ogo gị.
N'aka nke ọzọ, jụọ onwe gị ụbọchị ole ị na-eme egwuregwu kwa izu, ole nri eghe, carbohydrates ma ọ bụ nri na-adịghị mma ị na-eri n'izu.
N'ime nri ị kwesịrị 'ịta ahụhụ' anyị ga-ejide onwe anyị mana anyị ekwesịghị ịta ahụhụ n'oge niile anyị na-eme ya. Anyị ga-eri nri site na ụdị nri niile na-ahapụghị nke ọ bụla, anyị ekwesịghị itinye ahụike anyị n'ihe egwu site na izere iri abụba ma ọ bụ carbohydrates.
Nweta otu nri ziri ezi ebe otu nri nile di, ego kwesiri ekwesighi ma gabiga nke obula.
Na-atụ aro nri
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Ha kwesiri ibu ihe oriri karisiri na nri gi. Were ugboro ise kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ, ezigbo efere esiri esi, nke a roara n’ọkụ ma ọ bụ nke esiri esi. Na mgbakwunye, iwebata inine dịka salad ọhụrụ na mkpụrụ osisi nke oge na mma iji nwee ume na vitamin.
Gwa ndị carbohydrates ọ dịkarịa ala otu ugboro n’ụbọchị, dị ka osikapa, pasta ọka wit dum, poteto, ma ọ bụ achịcha. Dị ka o kwesịrị, were gram iri atọ nke carbohydrate ọ bụla ịchọrọ.
Anyị ekwesịghị ichefu inu mmiri enweghị mmiri ọ bụla n'ụbọchị, n'oge nri na ụbọchị ndị ọzọ.
Na-atụ aro ego
200 grams nke anụ na-enweghị abụba. Ihe kachasị mma bụ iri oke bekee, anụ ọkụkọ, anụ nwa,
200 gram nke azụ ọcha ma ọ bụ akwa.
60 gram nke osikapa agba aja aja ma ọ bụ pasta ọka niile.
300 grams nduku.
70 grams nke mkpo.
400 grams nke keagwaraogwa inine.
400 grams nke mkpụrụ osisi ọhụrụ.
Otu iko mmanya eke.
Nri iji zere
Ọzọ anyị ga-agwa gị gịnị bụ nri anyị ga-ezere, iji nwetaghachi ọnụ ọgụgụ ahụ ma ghara ịdaba n'omume iri nri dị njọ.
Nri nwere abụba dị ka sausaji anụ ezi, nwa atụrụ ma ọ bụ anụ ezi, bọta, margarines, fatty ma ọ bụ chee chiiz.
Nri esi nri. Ọ bụ ezie na ha nwere ahụ iru ala nke ukwuu n'ihi na ọ bụ naanị na ha kwesịrị iwe iwe, ha jupụtara na abụba, sugars, na oke nnu. Ọ bụrụ na anyị kpebie ịnwe nri a kwadebere, lelee akara ya ka o wee nwee ahụike dị ka o kwere mee.
Ejila ihe oriri akwadoro ma obu nke emere n'ụlọ. Ejila nri dị na creams, mmanụ ma ọ bụ bọta. Nakwa, zere ndị vinaigrettes niile a na-ere dị ka ọkụ ma ọ bụ ọkụ n'ihi na ha adịghị ahụike. Ihe kachasị mma bụ iji ekpomeekpo ma jiri lemon ọhụrụ mee uwe gị.
Achịcha ụlọ ọrụHa bụ nri jupụtara na shuga, abụba juputara, abụba transgenic, nnu, ihe nchekwa na ọtụtụ ihe na-adịghị mma maka ahụ ike. Ya mere, egbula kuki, achịcha dị iche iche, ma ọ bụ achicha emere.
Ihe ọ Softụ Softụ dị nro tinyere shuga. Otu iko nkịtị nke soda kachasị amasị gị nwere ike imebi nri gị, zere ị drinkingụ sodas jupụtara na shuga ndị na-abaghị uru ọ bụla.
Zere ị drinkingụ mmanya na-aba n'anya. Ha na-eme ka anyị maa abụba n’ihi na calorie ha na-aba ụba.
Atụmatụ iji mepụta
Ejila ije nri ututu. Ọ bụ nri kachasị mkpa n’ụbọchị ahụ, ọ ga - enye gị ume ma ọ gaghị adị gị ka ị ga - eri nri n’eriri nri.
Chọta nri na nri. Erila nri nke ukwuu ma rie obere. Havekwesiri imeju onwe gị n'oge nri ọ bụla ma jiri nri dị mma.
Rie nri iri ato, nri ehihie na nri.
Rie nri aracha skimmed.
Were mkpụrụ kwa ụbọchị, na-ahọrọ oge maka oge na eke.
Dum ọka na ihe kacha mma maka nri ụtụtụ.
Jikwaa mmanụ ị na-a perụ kwa ụbọchị, Ikwesighi igafe okpukpo ato n’otu mgbe ichoro nri.
Ngwakọta nri bara ụba na carbohydrates con Akwụkwọ nri y protein.
na nri abalị ha ga-abụ ìhè na n'oge elekere.
Na-etinye mgbe niile akwụkwọ nri na nri abalị.
Rie nwayọ nwayọ n'ebe izu ike na-enweghị nrụgide ma ọ bụ ọsọ ọsọ. I kwesiri iwepụta oge, jiri ohere ahụ wee rie nri.
Bụ nri apụtaghị na ị bụ onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya. ị kwesịrị ịnụ ụtọ ma jiri ihe ị na-eri kpọrọ ihe. Naanị ị ga-ejikwa ego na ụzọ esi esi ha.
Echefula ịmega ahụ. Ọ dị ezigbo mkpa ime ka ahụ rụọ ọrụ. Ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'izu.
Nchịkọta calorie 1.500
Iko nke mmiri ara ehi, mmiri ara ehi ma ọ bụ mmiri ara ehi. Na kọfị ma ọ bụ tii.
2 iberibe achịcha ọka wit niile.
Onu nke skimmed ohuru na
Iberibe mkpuru osisi.
Sie nri ma ọ bụ sie akwụkwọ nri nke nwere ngaji nke mmanụ oliv.
30 grams nke mkpo.
Azụ ọcha ma ọ bụ otu ụzọ n’ụzọ anọ nke ọkụkọ achicha.
Salad akwukwo nri na akwukwo nri ndu, nke nwere mkpuru iche iche nke tuna, anchovies abuo na obere anki.
Mpekere achịcha 2 ma ọ bụ tinye gram 25.
1 mkpụrụ osisi.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ifelata n’uzo dị mma ma dịkwa mma, egbula oge ịgakwuru endocrinologist ka o duzie gị na usoro ibu ibu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Nri calorie 1500